သတင်း Gazzette | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » သတင်း Gazzette	4
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 17, 2016 in Aha! Jokes, Satire |4comments
လိင်တူခြသူများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရန် လှုပ်ရှားမှုကို ဂဇက်ရွာ ထီးပါတီမှ တဝက်ထောက်ခံသည့် အနေဖြင့် လာဘ်စဗီယံ ယောက်ျားလျှာများကို ဒူးတင်ပေါင်တင် လရည်တပြင်တီး ဆက်ဆံသွားရန် ကတိပြုသည်။
ရန်ကုန်ဝံကျီးချုပ် ကွီးဖြိုး၏ လျှပ်စစ်မီး ၂၄နာရီ တနှစ်အတွင်းရရေး စီမံချက်ကို အနှစ်၂၀ ရေရှည်စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဖယောင်းတိုင်နှင့် အင်ဗာတာ လုပ်ငန်းရှင် ခိုနီဒုံနှင့်ခိုပြာမားတို့မှ တင်ပြသည်။
ဂဇက်သဂျီး မာမွတ်ခိုင်မ် ဘီကီနီမော်ဒယ်ရှိုးဖွင့်ပွဲ့သို့ သွားရည်ခံ ရင်ပတ်ချိတ် တက်ရောက်လာရာ ရာမာရ်ဒါန် ဥပုသ်လအတွင်း တံတွေးပင် မြိုချခွင့်မရှိဟု သိရည်။
ပြည်မြို့ဘတ်စ်ကားတစင်းပေါ်တွင် ခရီးသည်အမျိုးသမီးများကြားထဲ တထောင်ထောင်နှင့် တွေ့ရသော ရဲဇုတ်လျှာမြက ၄င်းတို့အနေနှင့် အစိုးရသစ်လာဘ်ထက် ပြည်သူများနှင့် ပိုမိုထိတွေ့ ဆက်ဆံနေသည်ဟု ဆိုသည်။
၂၁လျှာစု ပင်လုံညီလာခံအကြိုအဖြစ် အပစ်အခတ် မရပ်စဲရသေးသော သဘုံအဖွဲ့၂ခုနှင့် စေ့စပ်ပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ ညှီလာခံအုတ်ကထ ဦးကြောင်ကြီးက ကခြင်သဘုံတပ်မှူးလုမ၊ ကွင်သဘုံတပ်မှူးကင်းကောင် တို့အား မီနီစကပ်တိုနှင့် စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်လည်ဟိုက် ယူနီဖေါင်းဝတ် လာရန်နှင့် အဆင်ပြေလျင် နောက်တဆင့် ချက်ခြင်းတက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထားသည်။
မြန်တြံ့ပြည်တွင်း သစ်တောပြုန်းမှုမှာ ထင်းလောင်စာခုတ်ယူမှုကြောင့်ဟု သစ်တောဌာန၏ ပြောဆိုချက်ကို အိုအိုင်စီကိုယ်စားလှယ် မာမူခိုမ်မှ ထောက်ခံလိုက်ပြီး ဝက်သားတုတ်ထိုးများကလည်း အကြောင်းတရပ် ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုသည်။
ငမူး ဂဒူးနှင့် အရူးပေါသော ဂဇက်ရွာတွင် ရူးနေသည်ဆိုသော အဆဲပါတီအုပ်ကထ နေမျိုးဝေအား ဂုံဒူးစောင် ရွာသားအဖြစ် လာဘ်ခံရန် ရွာအပြင်တွင်နေသူ ဦးကြောင်ကြီးမှ တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
လူစီးကားပါမစ်များ ရပ်ဆိုင်းရွေ့ မကျေနပ်လျင် လားနှင့်ချား ပြောင်းစီးပါဟု ရေးထားသော ဂဇက်သတင်းစာ အယ်ဒီတာအာဘော်အား လူအများ ကန့်ကွက်နေသည်။
ဝီဂါမုမ ရန်ကုန်သို့ မကြာခင် လာရောက်မည် ဖြစ်ရာ အိုအိုင်စီဥုတ်ကထ တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝံကျီး၏ နောက်ဆက်တွဲ ခရီးစဉ်အဖြစ် ရှုမြင်သုံးသပ်လျက် ရှိသည်။
ရုရှား မြန်တြံ့ စစ်ဖက်ကဏ္ဍ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်လာခြင်း သင်္ကေတအဖြစ် မြန်တြံ့လေတပ်မှ ရုရှားလုပ် ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျမှုကို ဂဇက်စစ်ရေးသုတေသီ ဖက်စစ်တိန်မဲ ရည်ညွှန်းလိုက်ပြီး ရုရှားလုပ်လေယဉ်သာ ပျက်ကျပါက လူ၃ဦးမက သေဆုံးမည်ဟု ကာကွယ်ပြောကြားသည်။
မြစ်ဆုံရေကာတာ ဝါဒဖြန့်ချီမှု တစိုက်မက်မက် ပြုလုပ်နေသည့် တလုပ်သဘုံကြေးမုံဂျီးက ၂၀၁၈ မတိုင်ခင် စီမံကိန်း အကောင်ထည် ပေါ်ရမည် ကြုံးဝါးမှုအပေါ် မြန်တြံ့သဘုံ ကြောင်ကြီးမှ ၂၀၁၈ ကဗာ့ဖလား ဘော်လုံးပွဲတွင် တလုပ်အသင်း ဗိုလ်စွဲမည်ဟု တန်ပြန် ဟောကိန်းထုတ်လိုက်သည်။
ခင်ဇော် says: ဝီဂါမုမ ဒီ တစ်ခေါက် ခီးဇင်မှာ
ထမင်းဝိုင်းကို ဝက်မလွတ်ဟင်း နဲ့ စီဇင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုဂျင်ဘာဒယ်။
Kaung Kin Pyar says: ပူနွေးလာသော ရာသီဥတု အလိုအယ.. ယောင်ဆုံဆွတ်ကြယ်အင်းကျီများအား.. ရွာထဲတွင် များများ ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးပါရန်.. ရွာပြင်ထွက်ရပ်ပေါက်.. အူးကြောင်ကြီးအား ကွင်သဘုံကင်းကောင်မှ.. တောင်းဆိုဘာဒယ်….
kai says: တရာပြဆြာမနိုးနိုးလေး အတွက် ၉၉ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမည် ကတိပေးထားသော ကကြောင်ကြီး ကတိမတည်သဖြင့် တာဝန်ယူထားသော မမတို့မှာ..လက်စပီယံကလပ်ဖွင့်ကာ.. တိုင်ပတ်မူး.. ထွက်ကပြီးရံပုံငွေရှာရမလိုဖြစ်နေသည်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12185
Thint Aye Yeik says: .မြန်ကြံ့သဗုံ ဒေါင်ချူးဘောင်ကူး အောင်ကျူး အား
.ကြွက်ဒဂေါင်က ချီသွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ၄င်းကြွက်သည် ကြောင်ဂဂေါင်အိ blackကာယ ပြုလုပ်ခြင်းခံရဖူးသည့်
.ကြွက်ဒဂေါင် ဖြစ်သိအပျဉ် ၄င်းတို့ ကြွက်တွင်းလောကတွင် သုကိုယ်သူ ကြွက် gay ပါဟု ထုတ်ဖော် ကြေညာထားသူဟု သိရသည်။
ယခု ၄င်း ကိုက်ချီသွားသည့် ဒေါင်ချူးဘောင်ကူး အောင်ကျူးဆိုသည်မှာ ၄င်းနှင့် တချိန်ဂ ပတ်သက်ခဲ့သိ sexလမ်းတခုခုတော့ ရှိရမည်ဟု သတင်းကောက်များက ၃သပ်နေကြသီ။